Lutris 0.5.9 inouya nerutsigiro rwe AMD FSR, DLSS, gamescope uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Darkcrizt | 11/10/2021 11:00 | Yakagadziridzwa ku 15/10/2021 03:24 | Linux Mitambo, Zvirongwa
Mushure rinenge gore rekuvandudza kuburitswa kweshanduro nyowani ye «Lutris 0.5.9» yakaziviswa umo shanduko dzakasiyana dzakaitwa dzinovandudza kuitiswa uye mashandiro emitambo, pamwe neshanduko munzira yekutsigira Steam Deck.
Kune avo vasingazive naLutris, rega ndikuudze kuti izvi maneja mutambo yakavhurwa sosi yeLinux, uyu maneja ane nerutsigiro rwakananga rweSteam uye zvakare kune anopfuura makumi maviri emitambo emitambo mukati medu yatinogona kusanganisira DOSbox, ScummVM, Atari 20, Snes800x, Dolphin, PCSX9 uye PPSSPP.
Iyi software huru Iyo inotibvumidza isu kuunganidza zviuru zvemitambo kubva kumapuratifomu akasiyana mune imwechete application, yatinga taure nayo kuti ndiyo Kodi yemitambo. Naizvozvo, iri sarudzo yakanakisa kune yega gamer.
Aya ma installers anopihwa nenharaunda yayo hombe kufambisa kuiswa kweimwe mitambo iyo inofanirwa kumhanya pasi peWine.
Uyezve, Lutris Iyo ine rutsigiro rweStam saka mazita atinawo muaccount edu anogona kuwiriraniswa naLutris uye zvakare kumhanya izvo zvinozvarwa kuLinux kana zvikasadaro isu tinogona zvakare kumhanya Steam pasi peWine uye iyo inosimudza inozotarisira zvese.
1 Zvinyorwa zvitsva zveLutris 0.5.9
2 Maitiro ekuisa Lutris paLinux?
2.2 ZveUbuntu uye zvigadzirwa:
2.3 Zve Fedora
2.6 ArchLinux uye zvigadzirwa:
Zvinyorwa zvitsva zveLutris 0.5.9
Zvemitambo inomhanya neWine uye DXVK kana VKD3D, pane sarudzo yekugonesa AMD FSR tekinoroji (FidelityFX Super Resolution) kudzikisa kurasikirwa kwemhando yemifananidzo kana uchikwirisa pane ekuratidzira kwepamusoro. FSR inoda lutris-waini iiswe neFShack zvigamba, uye iwe unogona kuseta resolution yemutambo kunze kwekugadziriswa kwescreen mumitambo yemitambo (semuenzaniso, unogona kuseta 1080p pachiratidziro che1440p).
Imwe yeshanduko inomira mushanduro iyi nyowani ndeyekuti yekutanga rutsigiro rweDLSS tekinoroji inoitwa, iyo inogonesa iyo Tensor cores yeNVIDIA mifananidzo yemakadhi kuti ishandiswe kuyera mifananidzo chaiyo uchishandisa nzira dzekufunda dzemuchina kuwedzera resolution pasina kurasikirwa nehunhu. Kuita kweDLSS hakusati kwavimbiswa nekuda kwekushaikwa kwekadhi reRTX rinodiwa kuti riongororwe.
Wakawedzera kugona kushandisa Steam's Windows kuvaka, mhanya kuburikidza neWine, pane iyo Steam yemuno Linux vhezheni sosi yekuisa mitambo. Iri basa inogona kubatsira mukutamba mitambo yakachengetedzwa neECG DRM saDuke Nukem Nokusingaperi, Iyo Rima 2, uye Vatorwa Colonial Marine.
Uye zvakare, zvinojekeswa izvo yakawedzera rutsigiro rwemitambo, composite uye hwindo maneja anoshandisa iyo Wayland protocol uye inoshandiswa pane iyo Steam Deck. Mukuburitsa kwemberi, basa rinotarisirwa kuenderera mberi nekutsigira Steam Deck. uye gadzira yemaitiro mushandisi interface yekushandisa pane ino mutambo wekhoni.
Nokusingaperi, kuenderana neiyo Esync mashandiro (Chiitiko cheChiratidziro) inogoneswa kuwedzera mashandiro emitambo yakawanda-yakamisikidzwa.
Wakawedzera rutsigiro rwekuisa mitambo kubva kuEpic Games Chitoro kuburikidza neiyo Epic mutengi kusangana.
Wakawedzera rutsigiro rweDolphin mutambo koni emulator sosi yekuisa mitambo.
Yakagadziridzwa rutsigiro rwekungozviona nekuisa GOG mitambo uchishandisa Dosbox kana ScummVM.
Yakagadziriswa Steam kusangana: Lutris ikozvino anoona mitambo yakaiswa kuburikidza neSteam uye inokutendera iwe kuvhura Lutris mitambo kubva kuSteam.
Yakagadziriswa nyaya dzenzvimbo kana uchivhura Lutris kubva kuSteam.
Yakapa kugona kwega kusiyanisa VKD3D uye DXVK Direct3D kuita.
Nokusingaperi, iyo 7zip utility inoshandiswa kuburitsa mafaera.
Nekuda kwenyaya mune mimwe mitambo, iyo AMD Inoshanduka Graphics Layer michina yakaremara, ichibvumira kuchinja pakati pevanotyaira AMDVLK neRADV Vulkan.
Tsigiro yevakuru Gallium 9, X360CE, uye WineD3D sarudzo yabviswa.
Chekupedzisira, kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve iyi nyowani vhezheni, iwe unogona kutarisa iyo ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Maitiro ekuisa Lutris paLinux?
Kuti uve neiyi software huru mugadziriro yedu, isu tinofanirwa kuita zvinotevera, tiri kuzovhura chinouraya ctrl + alt + T uye zvinoenderana nesisitimu yatinayo tichaita zvinotevera:
ZveUbuntu uye zvigadzirwa:
ArchLinux uye zvigadzirwa:
Kana iwe uine ArchLinux kana yakabva pairi, isu tinokwanisa kuisa Lutris kubva kuAUR repositori nerubatsiro rweYaourt
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Lutris 0.5.9 anosvika nerutsigiro rwe AMD FSR, DLSS, gamescope nezvimwe